မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း အတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အခမဲ့ ရရန်ရှိ ( ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း တွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ ရောဂါအခံ ရှိသူ အတွက်ကတော့ သတင်းကောင်းပါ….) – Shwe Sar
မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူဦးရေ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်း အတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေး အခမဲ့ ရရန်ရှိ ( ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း တွေ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ ရောဂါအခံ ရှိသူ အတွက်ကတော့ သတင်းကောင်းပါ….)
By Shwe SarPosted on November 14, 2020
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးရရှိလာချိန်မှာစန စ်တကျထိုးနှံ့ေ ပးနိုင်ဖို့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု တွေဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ ၂၀၂၁ခုနှစ် ပထမလေးလ ပ တ် တာ ကာလအတွင်း COVID ကာကွယ်ဆေးတွေရ ရှိလာမယ်လို့မှန်းထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေ (၂၀) ရာခိုင်နှုန်းအတွက် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးတွေအလှူခံရရှိဖို့ရှိတယ်လို့ ကျန်း မာေ ရး အသိပညာမြှင့်တင်မှုဌာနခွဲ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာသ န်းနိုင်စိုးကပြောပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ COVAX ဆိုတဲ့ ကာကွ ယ်ေ ဆး နဲ့ပတ်သက်ပြီး မှန်ကန်တဲ့အ ရည်အသွေးနဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိတဲ့ ကာကွယ်ဆေးတွေကို နိုင်ငံအားလုံးမျှမျှတတ ရရှိဖို့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းဆိုတာရှိတယ်။ အဲဒီ့ အဖွဲ့အ စ ည်း နဲ့ကြို တင်ညှိနှိုင်းချ က်အရမြန် မာနိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုတော့ သူတို့ဘက်နေ Face by Face ပေးသွားနိုင်ဖို့အနေအထားရှိတယ်။ အဲဒါ ကတော့ အလြှူ ဖစ်ဖို့များ တာေ ပါ့လေ။
တစ်ဖက်ကလည်း ကျန်တဲ့လူတွေ အတွက်လည်းေ ဆွးနွေးညှိနှိုင်းထားတာ တွေအများကြီးရှိတယ်။ ဘိုင်လက်ထရယ်တွေရဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာ တရုတ်နဲ့လည်း ညှိနှိုင်းထား တာရှိတ ယ်။ အိန္ဒိ ယနဲ့လ ည်းညှိနှိုင်းထားတာရှိတယ်။ ရုရှားနဲ့လည်းဆ က်သွယ်ဆောင်ရွက်ထားတာရှိတယ်။ ဒါတွေကလည်း ကျွန်တော်တို့ေ စာင့်ကြည့် ရဦး မှာဖြစ်တယ်။အ ကုန် လုံးနဲ့ကိုကျ ယ်ကျ ယ်ြ ပန့်ပြန့်ချိတ်ဆက် ထားတယ်။ တစ်ဘက်ကလည်းဘယ်လို ဆေးမျိုးကို အတည်ပြုပြီးတော့ဘယ်လိုဆေးမျိုးကအစွမ်းထက်တယ်။ ကျွန်တော် တို့နိုင်ငံကလည်း ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ ဒေသတွေ ရှိ တယ်ေ ပါ့။ကျေးလက်ဒေသေ အာက်ခြေထိရောက်အောင်ဘယ် လိုဟာမျိုး (ကာကွယ်ဆေးမျိုး) ကသင့်လျော်တယ်။
ဒါမျိုးတွေကို ဘက်ပေါင်းစုံကစဉ်းစားရမယ်” လို့ ဒေါက်တာသန်းနိုင်စိုးကပြောပါတယ်။ COVID-19ကာကွယ်ဆေးဟာ အအေးလမ်းကြောင်းနဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်မှ ဆေးအာနိသ င်အြ ပည့်အဝ ရ မှာဖြ စ်တဲ့အတွက်အအေးလမ်း ကြောင်းနဲ့ သယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ဖို့နဲ့ ကာကွယ်ဆေးကိုစနစ်တကျထိုးနှံ့ပေးနိုင်ဖို့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကို Training ပေးတာတွေကို ကြိုတင်ဆော င် ရွ က် ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးရရှိလာပါက ရှေ့တန်းကရောဂါကုသ၊ တိုက်ဖျက်ရေးတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေ၊ စေ တနာ့ ဝန် ထမ်းတွေနဲ့ ဦးစားပေးအုပ်စုဝင်တွေဖြစ်တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ ရောဂါအခံရှိသူတွေကို ဦးစွာထိုးပေးပြီး ဝန်ထမ်းတွေ၊ ပြည်သူတွေကိုဆက်လက်ထိုးနှံပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ဒေါက် တာ သန်းနို င်စိုးကပြောပါတယ်။
COVID-19 ကာကှယျဆေးရရှိလာခြိနျမှာစန ဈတကထြိုးနှံ့ေ ပးနိုငျဖို့ ကနျြးမာရေးနှငျ့အားကစားဝနျကွီးဌာနက ကွိုတငျပွငျဆငျမှု တှဆေောငျရှကျနပေါတယျ။ ၂၀၂၁ခုနှဈ ပထမ လေး လ ပ တျ တာ ကာလအတှငျး COVID ကာကှယျဆေးတှရေ ရှိလာမယျလို့မှနျးထားပွီး မွနျမာနိုငျငံရဲ့ လူဦးရေ (၂၀) ရာခိုငျနှုနျးအတှကျ COVID-19 ကာ ကှယျ ဆေး တှေ အ လှူခံရရှိဖို့ရှိတယျလို့ ကနျြး မာေ ရး အသိပညာမွှငျ့တငျမှုဌာနခှဲ၊ ညှနျကွားရေးမှူး ဒေါကျတာသ နျးနိုငျစိုးကပွောပါတယျ။ “ကြှနျတျောတို့ကစောငျ့ကွညျ့ရမှာပေါ့။ ကမ်ဘာ့ကြ နျး မာရေး အဖှဲ့ ကွီးရဲ့ COVAX ဆိုတဲ့ ကာကှ ယျေ ဆး နဲ့ပတျသကျပွီး မှနျကနျတဲ့အ ရညျအသှေးနဲ့ ဘေးကငျးလုံခွုံမှုရှိတဲ့ ကာကှယျဆေးတှကေို နိုငျငံအားလုံးမြှမြှတတ ရရှိဖို့ ဆော ငျရှကျနတေဲ့ အဖှဲ့အစညျးဆိုတာရှိတယျ။ အဲဒီ့ အဖှဲ့အ စ ညျး နဲ့ကွို တငျညှိနှိုငျးခြ ကျအရမွနျ မာနိုငျငံရဲ့ လူဦးရေ ၂၀ ရာခိုငျနှုနျးလောကျကိုတော့ သူတို့ဘကျနေ Face by Face ပေးသှားနိုငျဖို့အနအေထားရှိတယျ။ အဲဒါ ကတော့ အလွှူ ဖဈဖို့မြား တာေ ပါ့လေ။
တဈဖကျကလညျး ကနျြတဲ့လူတှေ အတှကျလညျးေ ဆှးနှေးညှိနှိုငျးထားတာ တှအေမြားကွီးရှိတယျ။ ဘိုငျလကျထရယျတှရေဖို့ဆိုတဲ့ကိစ်စတှမှော တရုတျနဲ့လညျး ညှိနှိုငျးထား တာ ရှိတ ယျ။ အိန်ဒိ ယနဲ့လ ညျးညှိနှိုငျးထားတာရှိတယျ။ ရုရှားနဲ့လညျးဆ ကျသှယျဆောငျရှကျထားတာရှိတယျ။ ဒါတှကေလညျး ကြှနျတျောတို့ေ စာငျ့ကွညျ့ ရဦး မှာဖွ ဈတယျ။အ ကုနျ လုံးနဲ့ကိုကြ ယျကြ ယျွ ပနျ့ပွနျ့ခြိတျဆကျ ထားတယျ။ တဈဘကျကလညျးဘယျလို ဆေးမြိုးကို အတညျပွုပွီးတော့ဘယျလိုဆေးမြိုးကအစှမျးထကျတယျ။ ကြှနျတျော တို့နိုငျငံကလညျး ဝေး လံခေါငျဖြားတဲ့ ဒသေတှေ ရှိ တယျေ ပါ့။ကြေးလကျဒသေေ အာကျခွထေိရောကျအောငျဘယျ လိုဟာမြိုး (ကာကှယျဆေးမြိုး) ကသငျ့လြျောတယျ။
ဒါမြိုးတှကေို ဘကျပေါငျးစုံကစဉျးစားရမယျ” လို့ ဒေါကျတာသနျးနိုငျစိုးကပွောပါတယျ။ COVID-19ကာကှယျဆေးဟာ အအေးလမျးကွောငျးနဲ့ သယျယူပို့ဆောငျမှ ဆေးအာနိသ ငျအွ ပညျ့အဝ ရ မှာဖွ ဈတဲ့အတှကျအအေးလမျး ကွောငျးနဲ့ သယျယူပို့ဆောငျနိုငျဖို့နဲ့ ကာကှယျဆေးကိုစနဈတကထြိုးနှံ့ပေးနိုငျဖို့ ကနျြးမာရေးဝနျထမျးတှကေို Training ပေးတာတှကေို ကွိုတငျဆော ငျ ရှ ကျ ထားတယျလို့ဆိုပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာ COVID-19 ကာကှယျဆေးရရှိလာပါက ရှတေ့နျးကရောဂါကုသ၊ တိုကျဖကျြရေးတှဆေောငျရှကျနတေဲ့ ကနျြးမာရေး ဝနျထမျးတှေ၊ စေ တနာ့ ဝနျ ထမျးတှနေဲ့ ဦးစားပေးအုပျစုဝငျတှဖွေဈတဲ့ သကျကွီးရှယျအိုတှေ၊ ရောဂါအခံရှိသူတှကေို ဦးစှာထိုးပေးပွီး ဝနျထမျးတှေ၊ ပွညျသူတှကေိုဆကျလကျထိုးနှံပေးသှားမှာဖွဈတယျလို့ ဒေါကျ တာ သနျးနို ငျစိုးကပွောပါတယျ။
Previous post India နိုင်ငံမှာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ အမှတ်တရ ပုံရိပ်လေးတွေကို ဒေဝါလီနေ့မှာ မျှဝေလိုက်တဲ့ စမိုင်းလ်
Next post အရမ်းကောင်း တဲ့ စာလေးမို့ပါ.. ဆာလာင်နေသူ ကို ထမင်း တစ်လုပ် ကျွေးခဲ့ခြင်း ကြောင့် ပြန်ပြီး အကျိုး ခံစားရ